मिटरव्याजी पीडित आन्दोलनपछि मिटरब्याजी साहु अत्तालिएर ब्याज चाहिन्न साँवा भए पुग्छ – Daunne News
मिटरव्याजी पीडित आन्दोलनपछि मिटरब्याजी साहु अत्तालिएर ब्याज चाहिन्न साँवा भए पुग्छ
Daunne News	 प्रकाशित : असार ६, १२:३६
परासी । मिटरब्याजी साहुविरुद्ध भन्दै चार दिनदेखि काठमाण्डौंमा धर्नामा बसेका नवलपरासीका ऋणीहरुलाई सम्बन्धित साहुहरुले सावाँ बुझाए ब्याँज रकम मिनाहा गर्ने बताएका छन् ।
दृष्टिबन्धकबाट ऋण लिएका जिल्लाको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाबाट पुगेका ४० बढी ऋणीहरुले ऋण तिर्न नसक्दा लिलाम भएको जग्गा र चर्को रुपमा बुझाएको रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेर काठमाण्डौंमा दिनहुँ धर्ना दिदैं आएका छन् ।
गाउँका सुनिल बानियाँ र जगदिश बाँनिया साहुबाट मालपोत कार्यालयमा दृष्टिबन्धक गरेर ऋण लिएका ऋणीहरुले कानुनी कारबाही गरी न्याय पाउन भन्दै धर्नामा बसेका हुन् । धर्नापछि बानियाँद्धयले आइतबार परासीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सावाँ मात्र बुझाए पनि आफूहरुले ऋण मिनाहा गर्ने बताएका हुन् ।
आफूहरु विरुद्ध प्रशासनमा केही महिना अघि उजुरी दिएको र प्रशासनमा छलफलमा बोलाउँदा ऋणीहरु नआएको उनीहरुको दाबी छ । ‘आरोप मात्र लगाएका छन् । प्रमाण छैन । अनि कसरी प्रशासनमा आउँछन् ? काठमाण्डौंमा बसेर आरोप लगाउँदैमा हुँदैन । जिल्लामा आएर छलफलमा बसौं । साँवा बुझाउन मञ्जुर हुनुहुन्छ भने ब्याज मिनाहा गरिदिन्छौं ।’ बाँनियाद्धयको भनाई छ ।
‘मिटरब्याज र ठगीविरुद्ध संघर्ष समिति’ गठन गरेर काठमाण्डौंमा धर्ना दिएका ऋणीहरुले डेढ लाख ऋणको पटक पटक गरी १४ लाख बुझाउँदा पनि अझै बाँकी छ भन्दै थप कागज बनाउन दबाब दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर बानियाँद्धयले भने केही व्यक्तिसँग लिएको ब्याँजबापतको रकम भपाई गरिदिएको र अधिकांशले ब्याजसमेत नबुझाएको बताएका छन् ।
‘डेढ लाख ऋण बुझाउन नसक्नेले कसरी १४ लाख बुझाउँछ । कानुनभन्दा बढी रकम लिएको प्रमाण पेश गरेमा ऋणीहरुले लगाएको आरोपको रकमभन्दा दोब्बर दिन तयार छौं ।’ उनीहरुले भने ।
आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउन केही व्यक्तिले उचालेर आन्दोलन गराएको पनि बाँनियाद्धयको आरोप छ । ऋण नबुझाएपछि बाँनियाले अदालतमा मुद्दा हालेर केही ऋणीहरुको जग्गा आफ्नो बनाएका छन् ।
दृष्टिबन्धक कागजको समय १० वर्षको हुने र त्यो अवधिसम्म पनि रकम नबुझाएपछि म्यादको ५ दिनअघि मात्र आफूले अदालतमा मुद्दा हालेको बताएका छन् । ‘मुद्दा जितेपनि रकम बुझाएर जग्गा लैजानुस् भनेर पटक पटक ताकेता गरे । तर उनीहरु सम्पर्कमा आएका छैनन् । अहिले पनि जग्गा फिर्ता दिन तयार छु ।’ उनीहरुको भनाई छ ।
आफूसँग सम्बन्धित नरहेका व्यक्तिहरु पनि आन्दोलनमा सहभागी भएको बाँनियाद्धयको आरोप छ । सात वर्षअघि नै आफूले दृष्टिबन्धकबाट ऋण दिने कार्य बन्द गरेको उनीहरुको भनाई छ । ‘१० वर्षअघि लिएको ऋणको अधिकांश ऋणीहरुले ब्याँजसमेत बुझाएका छैनन् । तिर्न नसके मिनाहा गरिदिन्छु भनेर प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय हृदयेश त्रिपाठी र संविधान सभा सदस्य माननीय देवकरण कलवारको घरमै बोलाएर भनेका हौं ।’ त्यति गर्दा पनि नमानेपछि के गर्नु ? ’उनीहरुले भने ।
२०/५० हजार ऋण लिएका निम्न वर्गका व्यक्तिहरुको ऋण मिनाहा गरिदिनका लागि मालपोत कार्यालयमा बोलाए पनि उनीहरु नआएको बाँनियाद्धयको भनाई छ । अहिले पनि उनीहरुको ऋण मिनाहा गर्न आफूहरु तयार रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।